BCPS Board Approves Move to pre-K-12 Remote Learning | Battle Creek Public Schools
BCPS Board Approves Move to pre-K-12 Remote Learning
In response to the continued community spread of COVID-19 in Calhoun County, the BCPS School Board has approvedaplan to move all grades to remote instruction starting Monday, November 23. This includes grades Pre-K-12 as well as Adult Education.
The last day of in-person school for Prek-K-5 students is this Friday, November 20, and remote schooling will begin on Monday, November 23.
All in-person activities for athletics and extracurriculars for all grade levels are also postponed effective immediately, as identified under the current Emergency Order from the Michigan Department of Health and Human Services.
Learning will take place as follows:
Students in grades 6–12 will continue to engage in remote learning through Google Classroom, as they have been since the start of the school year.
Students in grades Pre-K–5 will bring their Chromebooks home from school on Friday, November 20, prepared to engage in remote learning using Seesaw (Pre-K–2) or Google Classroom (grades 3-5) starting Monday, November 23. Students will participate in both live and teacher-recorded learning sessions. Students will need their Clever login information to access all of the online platforms for remote learning.
English language learners and students with IEPs are eligible for continued small-group in-person activities and will receive direct outreach about these options.
Extended learning after school programs will continue with virtual programming.
** Login instructions and more information about each learning platform above can be found here.
According to public health officials, BCPS safety measures so far have been effective at limiting spread within our schools. However as community-based cases in Calhoun County have spiked, high numbers of staff have needed to quarantine away from work due to exposure outside of school, placing an operational strain on the district so that we cannot adequately staff for in-person learning at this time.
Current plans forareturn to in-person instruction are:
Grades Pre-K–5 to return to in-person instruction on Monday, January 18, 2021.
Grades 6–12 to move toahybrid model of in-person instruction beginning Monday, January 25, 2021.
Adult Education to return to in-person instruction on Monday, January 18, 2021.
Virtual Academy will continue being offered as an option for families. To help us prepare forasafe and smooth return to school buildings, families will be contacted during the weeks leading up to transition back to in-person instruction to select the preferred learning setting for their students for the next semester of the school year.
These plans will continue to be discussed and reviewed for feasibility with the BCPS School Board each month.
We will do our best to provide as much additional support as possible to families during this difficult time. Over the next week we will share more information about how to getaChromebook if your child does not bring one home, expanded meal distribution plans, how to get help with internet access at home, next steps for English language learners and students with IEPs, and more.
For technology questions, please first reach out to your student’s teacher. If they are unable to help resolve the issue, they will be able to refer you to the BCPS Help Desk.
For support accessing devices, meal pickups or for any other concerns, please contact (269) 245-6129.
La Junta de BCPS Aprueba el Cambio al Aprendizaje Remoto Para Grados Preescolar-12
En respuestaala continua propagación de COVID-19 en la comunidad en el condado de Calhoun, la Junta Escolar de BCPS aprobó un plan para mover todos los gradosainstrucción remotaapartir del lunes 23 de noviembre. Esto incluye los grados Preescolar al 12 y Educación para adultos.
El último día de clases en persona para los estudiantes de Preescolar al5es este viernes 20 de noviembre y el aprendizaje remoto comenzará el lunes 23 de noviembre.
Todas las actividades en persona para deportes y actividades extracurriculares para todos los niveles de grado también se posponen inmediatamente, según se identifica en la Orden de Emergencia actual del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan.
El aprendizaje se llevaráacabo de la siguiente manera:
Los estudiantes de 6-12 grado continuarán participando en el aprendizaje remotoatravés de Google Classroom, como lo han hecho desde el comienzo del año escolar.
Los estudiantes de Preescolar-5 grado traerán sus Chromebooks de la escuelaacasa el viernes 20 de noviembre, preparados para participar en el aprendizaje remoto usando Seesaw (Preescolar-2) o Google Classroom (grados 3-5)apartir del lunes, 23 de noviembre. Los estudiantes participarán en sesiones de aprendizaje en vivo y grabadas por el maestro. Los estudiantes necesitarán su información de inicio de sesión Clever para accederatodas las plataformas en línea para el aprendizaje remoto.
Los Estudiantes de Idioma Ingles (ELL) y los estudiantes con un IEP son elegibles para actividades continuas en persona en grupos pequeños y recibirán información directa sobre estas opciones.
Los programas de aprendizaje extendido después de la escuela continuarán con programación virtual.
** Las instrucciones de inicio de sesión y más información sobre cada plataforma de aprendizaje anterior se pueden encontrar en https://www.battlecreekpublicschools.org/news/online-platforms-for-remote-learning.
Según los funcionarios de salud pública, las medidas de seguridad de BCPS hasta ahora han sido efectivas para limitar la propagación dentro de nuestras escuelas. Sin embargo,amedida que aumentaron los casos comunitarios en el condado de Calhoun, una gran cantidad de personal tuvo que permanecer en cuarentena fuera del trabajo debidoala exposición fuera de la escuela, lo que generó una tensión operativa en el distrito, por lo que no podemos contar con el personal adecuado para el aprendizaje en persona en este momento.
Los planes actuales para regresarala instrucción en persona son:
Los grados de preescolar al5volveránala instrucción en persona el lunes 18 de enero, 2021.
Los grados6a 12 pasaránaun modelo híbrido de instrucción en personaapartir del lunes 25 de enero, 2021
Educación para adultos volveráala instrucción en persona el lunes 18 de enero, 2021.
La Academia Virtual seguirá ofreciéndose como una opción para las familias. Para ayudarnosaprepararnos para un regreso seguro y sin problemasalos edificios escolares, las familias serán contactadas durante las semanas previasala transición de regresoala instrucción en persona para seleccionar el entorno de aprendizaje de preferencia para sus estudiantes para el próximo semestre de este año escolar.
Estos planes continuarán siendo discutidos y revisados para su viabilidad con la Junta Escolar de BCPS cada mes.
Haremos todo lo posible para brindar la mayor cantidad de apoyo adicional posiblealas familias durante este momento difícil. Durante la próxima semana, compartiremos más información sobre cómo obtener un Chromebook si su hijo no lleva unoacasa, planes de distribución de comidas ampliados, cómo obtener ayuda con el accesoaInternet en el hogar, próximos pasos para los estudiantes que están aprendiendo inglés y los estudiantes con un IEP, y más.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con nosotros:
Para obtener asistencia tecnológica, primero comuníquese con el maestro de su estudiante. Si no pueden ayudararesolver el problema, podrán referirlo al centro de ayuda tecnológico de BCPS.
Para obtener ayuda para accederadispositivos, recoger comida o para cualquier otra inquietud, comuníquese al (269) 245-6129.
Para recibir asistencia en español, llame al (269) 419-1978. Para obtener asistencia en birmano, llame al (269) 601-6029.
BCPS ဘုတ်အဖွဲ့မှ (မူကြို- ၁၂) တန်းကျောင်းသူ/သားအားလုံးအတွက် ရပ်ဝေးမှသင်ကြားမှုသို့ရွှေ့ရန် သဘောတူသည်။
Calhoun County ရှိ လူထုအသိုင်းအဝိုင်းတွင် COVID-19 ရောဂါပြန့်နှံ့မှုရှိနေသောကြောင့်၊ BCPS ကျောင်းဘုတ်အ ဖွဲ့သည် ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် ရပ်ဝေးမှသင်ကြားခြင်းကို တနင်းလာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃
ရက်နေ့တွင် စတင်ရန် အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် မူကြိုကျောင်း မှစပြီး ၁၂ တန်းအထိ ပါဝင်ပြီး၊ သက်ကြီးပညာသင်ကြားရေးကျောင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။
လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သည့် မူကြို မှ ၅ တန်းကျောင်းသားများသည် သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့ အထိ၊ နောက်ဆုံးကျောင်းတက်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ တနင်းလာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်မှ စတင်၍ ရပ်ဝေးသင်ကြားခြင်းသို့ ပြောင်းလဲ သင်ကြားသွားရန် ဖြစ်ပါသည်။
Michigan ကျန်းမာရေးနှင့် လူသားဝန်ဆောင်မှုဌာန၏ အရေးပေါ်အမိန်ုထုတ်ပြန်ချက်အရ၊ အတန်းအားလုံး၏ အားကစား နှင့် ပြင်ပသင်ရိုးညွှန်းတမ်းများအတွက် လူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုလည်း အကျိုးသက်ရောက်သည့် နေ့မှ စတင်၍ ရက်များ ရွှေ့ဆိုင်းထားပါသည်။
သင်ကြားရေးများ အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလဲသွားပါမည်။
(၆-၁၂) တန်းကျောင်းသားများ - ကျောင်းစဖွင့်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သော Google Classroom ကိုဆက်လက် အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါသည်။
(မူကြို မှ ၅) တန်းကျောင်းသားများ- ယခု သောကြာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် စာသင်ကျောင်းမှ အိမ်သို့ Chromebook ပြန်ယူလာကြမှာ ဖြစ်ပါသည်။ တနင်းလာနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့မှ စတင်၍ (မူကြို မှ ၂) တန်း ကျောင်းသားများကို Seesaw နှင့် (၃-၅)တန်း ကျောင်းသားများကို Google Classroom ဖြင့် သင်ကြားသွားမှာဖြစ် ပါသည်။ ကျောင်းသားများအနေဖြင့် တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုတွင်၎င်း၊ ဆရာ/မများ၏ အသံသွင်းထားသောအရာများ ၌၎င်း၊ သင်ယူနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် အွန်လိုင်းသင်ကြားရေးတွင်ပါဝင်နိုင်ရန် ၎င်းတို့၏ Clever Login ပြန်လည်အသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားသူနှင့် တစ်ဦးချင်းလိုအပ်ချက်အတွက်သင်ယူသူ (IEPs) ကျောင်းသားများအတွက် အုပ်စုငယ်လေးများနှင့် ၎င်းတို့ရွေးချယ်ထားသည့်အတိုင်း လူကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားမှုများ ဆက်လက်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။
စာသင်ကျောင်းအပြီးသင်ကြားသည့်အစီအစဉ်များသည်လည်း အွန်လိုင်းမှ ဆက်လက်သင်ကြားသွားရန်ဖြစ်သည်။
** ဤအကြောင်းအရာနှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊ ဒီနေရာတွင် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://www.battlecreekpublicschools.org/news/online-platforms-for-remote-learning.
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများ၏ အဆိုအရ၊ BCPS ၏လုံခြုံမှုတိုင်းတာချက်အရ၊ စာသင်ကျောင်းအတွင်း ရောဂါပြန့်ပွား မှု ကန့်သတ်ရာတွင် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် Calhoun County အတွင်းနေထိုင်သူလူထုအတွင်း ပြန့်ပွားမှုရှိနေခြင်း ကြောင့် ကျောင်းပြင်ပရှိကူးစက်သူများနှင့် ထိတွေ့ရခြင်းကြောင့် ဝန်ထမ်းများနှင့် ကျောင်းသားများသည် ရောဂါခြေချုပ် ရပါ သည်။ ထို့ကြောင့် လူကိုယ်တိုင်တက်ရောက်သည့် စနစ်အတွက် စာသင်ကျောင်း၌ လုံလောက်သော ဆရာ/မများ မရရှိနိုင်ပါ။
လူကိုယ်တိုင် ပြန်လည်သင်ကြားခြင်းအတွက် ယခုလက်ရှိ အစီအစဉ်များ-
(မူကြို- ၅)တန်းကျောင်းသားများ လူကိုယ်တိုင်သင်ကြားခြင်းကို တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ တွင်စတင်ရန်။
(၆-၁၂) တန်းကျောင်းသားများ အွန်လိုင်းနှင့်လူကိုယ်တိုင် နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့်သင်ကြားခြင်းကို တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက်၊ ၂၀၂၁ တွင် စတင်ရန်။
သက်ကြီးပညာရေးကျောင်းသားများ လူကိုယ်တိုင်သင်ကြားခြင်းကို တနင်းလာနေ့၊ ဇန္နဝါရိလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၁ တွင် စတင်ရန်။
အွန်လိုင်းကညာရေးသင်ကြားမှု (Virtual Academy) ကျောင်းသားများအတွက် ဆက်လက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျောင်းအဆောက်အအုံသို့ လုံခြုံပြီး ဘေးကင်းစွာပြန်လာနိုင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်နေစဉ် စာသင်နှစ် နောက်နှစ်အတွက် ကျောင်းသားများ ပိုမိုနှစ်သက်သော သင်ယူမှုအစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ရန်အတွက် လူကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချမှု ဆီသို့ကူးပြောင်းသွားသည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း မိသားစုများထံဆက်သွယ်ပါမည်။
ဤအစီအစဉ်များကို လစဉ် BCPS ကျောင်းဘုတ်အဖွဲ့မှ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုအပေါ် ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤခက်ခဲသောအချိန်ကာလအတွင်း မိသားစုများအတွက် အတတ်နိုင်ဆုံးအကူအညီပေးနိုင်ရန် အစွမ်းကုန် ဆောင်ရွက်ကြပါမည်။ လာမည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များဝေမျှပေးသွားပါမည်။ သင့်ကလေးမှ Chromebook မယူလာသေးဘူးဆိုရင် ယူရမည့်နေရာရာများ၊ အစာထုတ်ထုပ်ယူရမည့်နေရာများ၊ အင်တာနက်ရရှိနိုင်သော နည်းလမ်းများ၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားနေသောကျောင်းသားများ နှင့် IEPs ကျောင်းသားများအတွက် သတင်း အချက်အလက်များ စသည့်တို့ပါဝင်ပါမည်။
အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါနေရာများတွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်၍ အကူအညီလိုအပ်ပါက၊ ကျောင်းသား၏ ဆရာ/မများထံသို့ ဦးစွာအကြောင်းကြားပေးပါ။ ၎င်းတို့မှ မဖြေရှင်းပေးနိုင်သောအခါ၌ BCPS Help Desk သို့ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ပါသည်။
နည်းပညာသုံးကိရိယာများအကူအညီအတွက်၎င်း၊ အစာထုတ်ထုပ်ယူခြင်းနှင့်၎င်း၊ အကူအညီလိုအပ်ပါက (၂၆၉) ၂၄၅- ၆၁၂၉ သို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
စပိန်ဘာသာအတွက်အကူအညီလိုအပ်ပါက (၂၆၉)၄၁၉-၁၉၇၉ သို့၎င်း၊ မြန်မာဘာသာအတွက်လိုအပ်ပါက (၂၆၉)၆၀၁- ၆၀၂၉ သို့၎င်း ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။